Midowga Musharixiinta oo ka carooday tallaabo u qaaday Safiirka Turkiga ee Muqdisho - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo ka carooday tallaabo u qaaday Safiirka Turkiga ee Muqdisho
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Danjire Mehmet Yilmaz ayaa shalay Gelinkii dambe waxaa uu Muqdisho kula kulmay Guddoomiyaha guddiga doorashooynka dowladda ee agu muransan yahay Maxamed Xasan Cirro.
Kulanka ayaa War kasoo baxay dowladda waxaa lagu sheegay in uu ahaa mid xog-isdhaafsi ah oo ku saabsan dardargelinta howlaha doorashada dalka, hayeeshee waxaa kulankaasi aad uga xumaaday oo ka jawaabay Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa loogu baaqay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya inuu dhex dhexaad ka noqdo arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya, iyagoo sheegay inay ka xun yihiin in Safiirka uu taageero iyo boggaadin u muujiyo Guddiga doorashada heer Federaal ee lagu muransan yahay.
Qoraalkooda waxaa ay sidoo kale ku sheegeen in uu isburinayo War-Saxaafadeedkii kasoo baxay Beesha Caalamka oo Turkiga qeyb ka yahay & taageerada uu safiirka Turkiga u muujiyay Guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka Qaranka.
Ugu dambeyn Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay Dowladda Turkiga taageerada joogtada ah oo ay had iyo jeer ay siiso Soomaaliya.
Xalay ayay aheyd markii Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya qoraal ay u direen Safaarada Turkiga ee Muqdisho ay walaac uga muujiyeen hub iyo saanad Milateri oo dowladda Turkiga ay qorsheneyso inay soo gaarsiiso dowladda Federaalka Soomaaliya, iyaga oo ka dalbaday inay joojiso.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo gaaray degmada Cabduwaaq
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo cadeeyay mowqifkiisa khilaafka Soomaaliya & Kenya